Badland 2 inoderedza mutengo wayo kwenguva shoma | IPhone nhau
Zviri kuramba zvichinyanyisa kuenda kutenderera chitoro cheApple uye tarisa kuti huwandu hwezvishandiso zvinogona kuburitswa mahara hwakakura, asi kuti izvi zvizere nekutenga kwe-mu-app uye mumwe anoziva kuti izvi zviri kubuda muruoko rwevagadziri neApple.
Uye ndinoti Apple, nekuti inofanirwa kumisikidza zvidiki kuti ikwanise kupa mu-app kutenga mukati memitambo. Hazvibatsiri, kana kumusimudziri kana kune vakomana vanobva kuCupertino, kukwanisa kurodha chikumbiro chaunobhadhara kuti ugone kutamba zvishoma kana iwe unobhadhara. Nenzira iyi mushandisi haakwanise kuwana zano rekuti mutambo unoshanda sei uye wotarisa kana uchimufadza.
Chikamu chekutanga cheBadland chaive mumwe wemitambo yakanakisa yakamhara paApp Store iyo yakatitendera kuti titambe chete kana takatenga mutambo. Kamwe akabhadhara taigona kutamba kakawanda sezvataida nekusingaperi. Frogmind, musimudziri weiyi yekutanga vhezheni, akavhura yechipiri vhezheni yeuyu mutambo unoshamisa mwedzi mishoma yapfuura, iyo, senge vhezheni yapfuura, yakatipa isu mukutsinhana ma4,99 euros kuti tikwanise kunakidzwa zvakasununguka uye pasina miganho.
Kwemazuva mashoma, Badland 2 ichave ichiwanikwa nechakakosha kuderedzwa kwe3 euros pamutengo wayo wenguva dzose, saka tinogona kuitora chete ma1,99 euros, chipo chatisingakwanise kupotsa. Badland yakatora padivi-scrolling yemitambo kune imwe nhanho ine hunyanzvi hwefizikisi-based gameplay yakasanganiswa neinoshamisa ruzha uye magiraidhi. Iyi yechipiri vhezheni inoenda ichitopfuurira nezvitsva maficha, nifty mazinga, uye akatonyanya kushamisa mifananidzo.
Ndinovimba ava vanogadzira avo vachiri kusiri kugamuchira mukati-app kutenga haisi mhuka iri panjodzi, nekuti zvikasadaro handizive zvichange zvichibva kuApp Store ...
BADLAND 21,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Badland 2 inoderedza mutengo wayo kwenguva shoma